I-China Type-C 15w wireless HUB (12 ku-1) abakhiqizi nabaphakeli |Wellink
I-Type-C 15w i-HUB engenantambo (12 ku-1)
15w ukushaja okungenantambo;Inethiwekhi enezintambo ze-RJ45 Gigabit;I-TF/SD isekela ukufundwa kwedatha kanyekanye;okokufaka kwe-PD3.0;I-USB3.0 5Gbps ngomzuzwana, ukudluliswa kwedatha ngesivinini esikhulu, isekela ukuxhumeka ngesikhathi esisodwa kwamadivayisi amaningi;I-HDMI 4K HD;I-VGA 1080P;Umsindo 3.5 mm.
Amandla wokushaja we-PD afinyelela ku-87w;
Zonke izinto zegobolondo le-aluminium alloy, ukuchithwa kokushisa okusheshayo.
Wireless charge Amandla
HDMI, USB 3.0*4, gigabit network port, PD 3.0*2, SD/TF card slot, 3.5mm audio, VGA
Intambo yamandla ye-AC
(CN, US GB, AU) ubude 1.5M
isiliva, ebomvu, empunga yesikhala, eluhlaza sasibhakabhaka, esagolide
Uhlobo C lokudlulisa ulayini wedatha nge
1. ukusekela ukudluliswa kwedatha eyi-10
2. isekela ukudluliswa kwevidiyo okungu-4k 60Hz, i-E-Marker chip
3. isekela ukushaja okuphezulu kwamanje kwe-PD100w
• UKUSHAJA OKUSHESHAYO NOKUDLULISELA IDATHA: Inezimbobo ezingu-3 ze-USB 3.0 ehlinzeka ngokudluliswa kwedatha okusheshayo okungafika ku-5 Gbps.Inamachweba angu-4 e-USB 2.0 enikeza izinga lokudlulisa elifika ku-480 Mbps, futhi isekela uxhumano oluzinzile ngekhibhodi negundane.Ishaja ikhompuyutha ephathekayo yakho kuze kufike ku-100W ngembobo ye-PD, ishaja amadivayisi wakho we-type-c kufika ku-18W ngembobo ye-PD.
• 15 IN 1 I-ADAPTER C ye-USB: I-SciTech 15 ku-Adapter engu-1 ilungele i-Apple Macbook namanye amadivayisi ohlobo C.Inembobo engu-4K@ 30Hz HDMI, imbobo ye-VGA, ishaja engenantambo, isifundi sekhadi le-SD/TF, 3 USB 3.0 Ports, 4 USB 2.0, Type C PD port charger (shaja kuphela), ijekhi yomsindo engu-3.5mm kanye neGigabit Ethernet .Qaphela: Ijekhi yomsindo ayisekeli iMic.
• ISHAJA ENGANAKAZI KANYE NENDAWO YE-ETHERNET IYAZIIZIMISELA : Izinsiza zohlobo C ezakhelwe ngaphakathi chip, zinikeza ukushaja okungenantambo kuwo wonke amadivayisi akho asekela ukushajwa okungenantambo njenge-AirPods Pro.Kungakhathaliseki ukuthi unasiphi isivinini se-inthanethi, i-RJ45 Port izoyibona futhi izilungise ngokuzenzakalelayo iye ezingeni eliphezulu kakhulu.
• I-ULTRA HD 4K OUTPUT : Fanisa ngezibuko ikhompuyutha ephathekayo ye-USB- C noma ukusakaza kwesikrini kwesikrini kwefoni okungu-4K HD noma ividiyo ye-HD 1080P egcwele usebenzisa imbobo ye-HDMI noma ye-VGA.Ihlangene futhi inokuxhumana okulula kuma-TV, amamonitha, nephrojekhotha ukuze kwenziwe izethulo, izingcingo zezingqungquthela, ithiyetha yasekhaya.Uma isixhunywe kukhebula ye-HDMI ne-VGA ngesikhathi esifanayo, ukulungiswa okuphezulu kwesibonisi ngasinye kuzoba ngu-1080P@ 60Hz.Qaphela: okukhipha ividiyo kudinga ukwesekwa kwembobo yohlobo c yedivayisi yakho ye-DP Alt Mode (Thunderbolt 3).
• 100% OKUQINISEKILEYO UKUMENELISA: uma ungajabuli ngokuthenga kwakho nganoma yisiphi isizathu, sicela usithinte futhi sizoxazulula inkinga yakho ngendlela egculiseka ngo-100%.Singashintsha idivayisi noma sikubuyisele imali egcwele yentengo yakho yokuthenga.Awunalutho ongalahlekelwa.
Umbuzo:Ngabe lokhu kuzosebenza nge-2020 apple ipad pro 12.9?
Impendulo:YEBO, Ingasetshenziswa ne-Apple iPad 12.9 kusetshenziswa isikhombikubona se-C.
Umbuzo:Ingabe lokhu kuzonika amandla idivayisi exhunywe kuyo?
Impendulo:Yebo lokhu kuzonika amandla idivayisi exhunywe kuyo inqobo nje uma inamandla axhumeke kuyo ngembobo ye-USB C.
Umbuzo:Ngiwathola kanjani amandla kulokhu?
Impendulo:Uma uxhuma amadivaysi amaningi kakhulu kule HUB, udinga ukunika amandla le HUB ngokuhlukene ngeshaja yohlobo c usebenzisa isixhumi esibonakalayo esinikezwe kule HUB.Ukuxhuma kalula i-HUB kukhompuyutha ngeke kushaje idivayisi futhi ngesinye isikhathi, i-HUB izosebenza kahle uma ingenalo uhlobo oluhlukile lwamandla c oluxhunywe kuyo.
Okwedlule: I-adaptha ye-gallium nitride engu-65w 12 kudokhi yohlobo C engu-1(2 ku-1)
Olandelayo: 5 ku-1 Type-C HUB,HDMI,USB3.0,TYPE-C PD100w